ချစ်သော ဇီ အတွက် :-) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ချစ်သော ဇီ အတွက် :-)	7
ချစ်သော ဇီ အတွက် :-)
Posted by မြစပဲရိုး on Dec 13, 2015 in Photography |7comments
ချစ်စဖွယ် ဘန်းဘန်း လေး ကို ပို့လိုက်တယ်။
အိမ်မက်လှလှ မက်စေသောဝ်။ :-))))
မြစပဲရိုး says: မျက်လုံးက အပြာကိုး။ :-)))
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟုတ်ပါ့
စိတ်ညစ်တိုင်းး Ellen Show မှာ သူ့ အသံတု ဂိမ်းကို ကြည့်ပြီးး ရီနေရဒယ်.
ဂျော်နီဒက် က သူ့ဘေးးမှာ ပို ရုပ်ဆိုးးသွားးသလိုလို…
E.မြောက်မြောက် says: အောက်မြီးမြီးအတွက် ဂလုချင်စဖွယ် ဘီအီးတစ်လုံးဘယ်မဒုံး
alinsett says: ပုံလေးတွေ တွဲစပ်ထားတာ ဂွတ်ဂွတ်
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဘန်းဘန်းလေး ပေးမယ်မှန်းသိ သများ အရီးကို စိတ်ကောက်ပါတယ်. . . Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အောက်မြည်း အတွက် ဘီအီး “ငု” လေးဆီပို့ထားဒလယ်။
ဆက်ဆက် – အဲဒါ ဘီဘီစီ show က လုပ်ထားတာ။ ရီရတယ်။
လုံမ ကို ဘန်းဘန်း လဲ ပို့လိုက်ရော အရီး ကို “အံအံ” စိတ်ကောက် သွားပြန်ရော။ :-))
Mike says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.